Kheyre: Intaan qabqablayaal sharaf ka raadin lahayn waxaan ka raadinaynaa shacabka Somaliyeed • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Kheyre: Intaan qabqablayaal sharaf ka raadin lahayn waxaan ka raadinaynaa shacabka Somaliyeed
December 15, 2018 - By: Hanad Askar
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa khudbad uu u jeedinayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Qadar waxa uu ka hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin xaalada siyaasadeed ee dalka,heshiisyada maalgeshi iyo ganacsi ee xukuumadiisa ay la gashay dowlada Qadar iyo arimo kale.
Ugu horeyn Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in dawladda Qatar ay wada gaareen heshiisyo waa wayn oo kor loogu qaadayo horumarka iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka isla maraana dhawaan la bilaabayo dhismaha wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Jowhar.
Ra’iisul Wasaare ayaa intaa ku daray in Qatar iyo Soomaaliya si dhaw isaga kaashanayaan dhinacyada gaadiidka cirka iyo dhulka, taas oo wax weyn ku soo kordhinaysa dhaqaalaha dalka Soomaaliya.
Mar uu si dadban uga hadlayay xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xiisadihii ugu dambeeyay ee uu dhaliyay mooshinkii dhawaan ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka gudbiyeen madaxweyne Farmaajo ayuu sheegay Ra’iisul wasaare Xasan in dariiqa saxda ah aan lagu cabsi galin karin.
Sidoo kale Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo uu muuqday mid durayay xildhibaanadii dhawaan mooshinka gudbiyay ayaa sheegay in ay dhameysan doonaan inta ka harsan mudo xileedkooda isla markaana dadka Sooomaaliyeed ay ka raadinayaan sharaf oo aanay dad qabqablayaal ah ka raadinayn wax sharaf ah sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba hadalka Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay 9-kii bishan mooshin xilka qaadis ah ay ka gudbiyeen madaxweyne Farmaajo mooshinkaas oo horseeday khilaaf xooggan oo soo kala dhex gala madaxweynaha iyo gudoonka golaha shacabka dhexdiisa.